Doctrine The Riyad, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
"Caqiidada rayiga" oo ay ku dooday qaar Masiixiyiin ah waxay la macaamilaan waxa ku dhaca kaniisada markii Ciise soo laabto - marka ay timaado "imaatinka labaad", sida caadiga ah waxaa loo yaqaan. Waxbaristu waxay leedahay in rumaystayaashu la kulmaan nooc kor u kaca yar; in loo jiheyn doono xagga Masiixa, waqti marka uu sharaftiisa ku soo noqdo. Aasaas ahaan, rumaystayaasha rayraynku waxay u adeegaan sidii marin keliya:
1 Tesaloniika 4,15:17 -:
«Waayo, waxaannu sidan kuugula hadlaynaa erey xagga Rabbiga ka yimid, annagu annagu waa nool nahay oo waannu sii jiri doonnaa ilaa imaatinka Rabbigu gooyn mayno kuwa hurday. Maxaa yeelay, isaga, Sayidow, markii amarku dhawaaqo, marka codkii malaa'igaha Ilaah iyo codkii buunka Ilaah samada ka soo dejiyo, kuwii ugu horreeyey ee Masiixa ku dhintayna la soo sara kicin doono. Markaas ka dib innagoo nool ama hadha ayaa aan kula qabsan doonnaa daruuraha hawada xagga Rabbiga, oo sidaasaynu had iyo goor Rabbiga ula joogi doonnaa. »
Rayrayn wuxuu u muuqdaa inuu dib ugu laabanayo nin la yiraahdo John Nelson Darby qiyaastii 1830. Wuxuu u qaybiyey wakhtigii kii labaad laba qaybood. Marka hore, ka hor dhibtii, Masiixu wuxuu u imaan lahaa quduusiintiisa («Kor u qaad»); Dhibaatada ka dib wuu la iman doonaa iyaga, oo keliya taasna Darby wuxuu arkay soo laabashada dhabta ah, 'imaatinka labaad' Masiixa ee quruxda iyo ammaanta. Mu'miniinta rayrayn rayrayn qaadataa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan marka rayrayn uu wajahayo "dhib weyn" (Dhibaato) ayaa dhici doonta: kahor, inta lagu jiro ama ka dib dhibaatada (Hore, dhexe iyo wixii ka dambeeya). Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira ra'yi laga tiro badan yahay, taas oo ah in uun xulasho la xusho oo ka dhex jira kiniisadda masiixiga lagu qabto bilowga cidhiidhiga.
Sidee ayaa loo yaqaan 'Grace Communion International' (GCI / WKG) rayrayn?
Markaan eegno 1 Tesaloniika 4,15: 17, rasuul Bawlos wuxuu umuuqdaa inuu dhaho markii dhawaaqa "Trump of God", kuwii ku dhintay Masiixa ay marka hore sara kici doonaan oo ay la imaan doonaan rumaystayaasha wali nool. daruuraha hawada, xagga Rabbiga ». Ma jiraan wax su’aal ah oo ah kiniisadda oo dhan - ama qayb ka mid ah kaniisada - in lagu soo qaado ka hor, inta lagu gudajiray ama kadib dhibaatada ama loo raray meel kale.
Matayos 24,29: 31 wuxuu umuuqdaa inuu kahadlayo dhacdo la mid ah. Sida ku xusan Matayos, Ciise wuxuu dhahay in quduusiintu isu soo urureen "isla markiiba laakiin dhibkii wakhtigaas" kadib. Sarakicidda, soo aruurinta ama, haddii aad jeceshahay, "rayrayn" waxay qaadataa meel si isku mid ah imaatinka labaad ee Ciise. Qorniinkaan, kala soocidda ay sameeyeen wakiilada caqiidada rayraynku way adag tahay in la fahmo. Sababtaas awgeed, Kaniisaddu waxay u taagan tahay fasiraad ujeedo ah oo ku xusan aayadda kor ku xusan oo uma aragto wax rayid ah oo gaar ah. Aayadaha su'aasha ayaa si fudud u sheegaya in quduusiinta dhintay ay la kici doonaan oo ay la midoobi doonaan kuwa weli nool markii Ciise sharaf ku soo noqdo.
Su'aasha ah waxa ku dhici doona kaniisadda ka hor, inta lagu guda jiro iyo ka dib soo laabashada Ciise wali waa mid si weyn u furan Kitaabka Quduuska ah. Dhanka kale, waxaan kalsooni ku qabnaa waxa Qorniinku si cad oo waadax ah u leeyahay: Ciise wuxuu ku laaban doonaa ammaanta inuu xukumo dunida. Kuwii isaga run ku sii noolaan doonana waa la soo sara kicin doonaa oo isagay kula jiri doonaan farxad iyo sharaf weligiis.